Taariikhda guusha. LLP "Zhuravlevka-1", Jamhuuriyadda Kazakhstan - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Qeybta "Sheekada Guusha", qeybta internetka ee joornaalka "Nidaamka baradhada" ayaa daabacda sheekooyin ku saabsan shirkadaha baradhada barafka ee Ruushka, iyo sidoo kale kuwa dhow iyo kuwa fog, oo ay direen Akhristeyaasheena.
Beerta waxaa la aasaasay 2005-tii tuulada Zhuravlevka, degmada Bulandy, gobolka Akmola. Muuqaalka ugu weyn: hadhuudhka soosaaray iyo saliida.
Sannadkii 2011, baradhada ayaa lagu daray safka dalagyada. Tan iyo wakhtigaas, celcelis ahaan 100-120 hektar ayaa loo qoondeeyey sannad kasta. Waxaan u isticmaalnaa beero, goos goos iyo qalab bakhaar oo ka socda GRIMME. Baradhadu waxay ku koray waraabka: Mashiinnada waraabka wareega ayaa la rakibay. Beergoosadka waxaa la dhigey oo si tartiib tartiib ah loo gaarsiiyey suuqyada jumladaha magaalooyinka Nuur-Suldaan iyo Shymkent.
Alexander Potvienko, maareeyaha guud ee Zhuravlevka-1 LLP ayaa yidhi: “Baradhadu Kazakhstan waa dalag caan ah, oo kordhaya taas oo aad ka heli karto macaash wanaagsan. - Xaaladda lagama maarmaanka u ah tan waa qiime soosaar hooseeya - 18-20 tog / kg ah (3-3,5 rubles / kg). Waxaan ka shaqeyneynaa arintaas ”.
Ilaa iyo sanadkii 2015, noocyada kala duwan ee lambarka 1 ee beertu waxay ahayd mid soosaar sare leh oo aan macno lahayn (Gala). Shirkaddu waxay ka iibsatay agab taranka dhalmada sare shirkadda NORIKA ee Jarmalka. Sannadkan Zhuravlevka-1 LLP wuxuu rajaynayaa inuu aruuriyo qiyaastii 4500 tan oo baradho ah. Kordhinta meelaha la beero iyo dib u cusboonaysiinta noocyo ayaa loo qorsheeyay xilli ciyaareedka soo socda.
Tags: baradho korayaGalaKazakhstan